Ny maintsy manao Eoropa Fitantarana By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny maintsy manao Eoropa Fitantarana By Train
Europe is an incredible continent to hijery! Miaraka izany zavatra be izany ny mahita, atao sy hahita, fa ny drafitra tonga lafatra toerana tsy manam-pahataperana, Eoropa mahatsapa lamasinina.
EOROPA Fitantarana lamasinina – VOALOHANY STOP, LONDRES:
Eoropa iray hafa traikefa lamasinina dia tokony hanomboka eny amin'ny London! Izany dia midika hoe fa “A bad day in London is still better than a good day anywhere else.” Noho izany, Aoka isika hanomboka any! Ny tsy maintsy tanteraka ny Harry Potter Tour ny Warner Bros. Studio na dia tsy misy Super-fan. The teknolojia, modely sy teo aoriany ny sehatra dia mahagaga sy tsara fotsiny mendrika ny mahita. Izao spellbinding 6 ora diany, indro milentika am-boalohany toy ny Sehatra 9 ¾ ary Diagon Alley; jereo ny Hogwarts etona fiaran-dalamby Express; mitaingina broomstick toy ny ario, ka harakarakany ny ambadiky ny sehatra zava-miafina ny sarimihetsika 'on-efijery wizardry. Izany Harry Potter Studio London fitetezam-paritra mandroso sy miverina ahitana mpanazatra fitaterana ary ny tapakila fidirana Read more about Harry Potter London Tour de Warner Bros. Studio amin'ny fieken-keloka Eto.
PARIS: hoe eny’ TO AN ARTIST PAINTING YOUR PORTRAIT
Ny ho avy Eoropa traikefa amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby tokony ho any Paris. Tamin'ny andron'i Picasso, Montmartre dia Bohemian paradisa feno lavaka sy misotro indrindra tampon-kavoana Windmill nivadika ho raffish dihy efitrano. ankehitriny, ny Place de Tertre ao amin'ny aloky ny SACRE COEUR dia feno mpanakanto izay hisambotra avy hatrany ny sarin. Ary rehefa afaka izany, mitsidika izao tontolo izao ny malaza indrindra moa trano fakana, ny sambo Lavoire, izay Picasso hoso-doko sy Braque, Juan Gri, ary Modigliani fahiny.
Tohatra miakatra NY NY NY EOROPA FIAINAKO lamasinina AMIN'NY herin'ny maizina ny MONTJUIC:
araka ny fiaran-dalamby nankany avy any Paris, ny manaraka Eoropa Fitantarana lamasinina tokony ho Barcelona. ankehitriny, alohan'ny hanomboka andao manao hoe ny fomba matetika ity tanàna mispronounced. Maro ny miezaka miteny anglisy ny feo ‘more espaniola‘ tamin'ny fanambarana ny 'C’ in Barcelona ho toy ny 'faha-’ ary nanao hoe: ‘Bar-the-lona’. Fa in Katalana (ny fitenin 'Catalonia, izay Barcelona is found), ny 'C’ dia tononina ho toy ny 's’ – ka 'Bar-up lamba’ ny marina no fanononana.
Ankehitriny fa manana izany ny lalana, ndao hiresaka Montjuïc tendrombohitra. Izany no tsara toerana ho maitso nitsangantsangana amin'ny tsara tarehy hevitra. Ataovy azo antoka ianao nahazo ny mandeha (na mihazakazaka raha tianao) kiraro, araka ny no maka kely legwork mba hahazoana ny any, fa izany dia midika fa Feno loatra ny hafa mpizaha tany. Ankoatra ny voajanahary manodidina sy ny fahitana mahatalanjona, ho hitanao trano avy amin'ny 1992 Lalao Olaimpika, ao anatin'izany ny Palau Sant Jordi and the telecommunications tower designed by Santiago Calatrava.
Prague: Fandehandehanana nanaraka ny tetezana fahiny MODY ny masoandro,
Prague dia fantatra ho toy ny fon'ny Eoropa. Tsara tarehy ity sy ny somary saro-pantarina an-tanàna no tsy maintsy jerena amin'ny Eoropa Traikefa amin'ny alalan'ny Fiaran-dalamby lavitra. Ny taonjato faha-14 Charles Bridge hiampita ny Reniranon'i Vltava goavam-be miaraka amin'ny ampahany ny 1000-taona lapa mananontanona ao ambadika. Fun zava-misy; mandra 1841, izany no hany fomba hiampita ny renirano avy amin'ny Old Town!
Offering Fairy-angano hevitra, ny mpandeha an-tongotra ihany no Gothic-tetezana vato no nilahatra tamin'ny 30 sarivongana ny olona masina sy ny tsara indrindra hariva, rehefa nitsidika tany am-boalohany ny masoandro, dia mametraka. raha toa ianao any amin'ny hafa manan-danja, Manao izany ho tena tantaram-pitiavana toerana.
Mety toa cheesy, fa rehefa mandeha any Venice, mitaingina ny Gondola ny alalan 'ny tanàna tena dia tsy maintsy. Ankoatra ny maha mahafinaritra sy ny tantaram-pitiavana, izany ihany koa ny fomba tsara indrindra mba hizaha ny tanàna! Tokony hifarana ny andro eny amin'ny alalan'ny fitsidihana ny stylish ny Bar Harry ho mamelombelona Bellini. Izany no fotsy paiso sy ny ranom prosecco, izay no namorona ny molotov ny fisotroana ny mpanorina.
Azia sy Eoropa ny traikefa lamasinina no UNIQUE ISTANBUL
Istanbul no malaza ho an'ny Blue Mosque. Raha manao izany fahazoan-dalana hidirana, we’d also like to draw your attention Istanbul is on the edge of Europe experiences by train, toy ny akaiky kokoa an'i Azia noho ny Eoropa.
Istanbul dia tsy mahavariana ambony tany, fa koa ambanin'ny tany miaraka amin'ny Basilica Lavaka (ny Basilica). Io mahafinaritra injeniera tapa-Byzance, dia fofonaina-fandraisana lavaka fanangonan-drano ambanin'ny tany, indray mandeha nitondra rano fisotro amin'ny lakandrano avy amin'izao fotoana izao Bolgaria ho any Istanbul. Eritrereto hazavana mafana, ary ny feon'ny Mandrotsaha fahamarinana rano malefaka miaraka amin'ny mozika kilasika nitsinjaka eo aoriana. Hanitsaka ny walkways sy hijery ny trondro milomano eo amin'ny 336 andry izay manohana ny valindrihana.
Mandeha SaveATrain.com to book your next train adventure in 3 minitra, ao amin'ny levitra fiaran-dalamby tapakila tahan'ny.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-experiences-by-train%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
tendron'ny fampiofanana	fiaran-dalamby soso-kevitra	Train Travel	travelfrance	travelitaly	travelspain	vorontsiloza